Bilbillikee akka gaariitti konkolaachistu si gargaaruu danda'aa? - BBC News Afaan Oromoo
Bilbillikee akka gaariitti konkolaachistu si gargaaruu danda'aa?
10 Amajjii 2018
Image copyright SafeDrive
Goodayyaa suuraa Wayita konkolaachifnutti bilbilli keenya nu jeequu danda'a. Garuu appiiwwan muraasni nagaa nu taasisu laata?
Tudoor Kobalaas osoo konkolaataa isaa oofaa ergaa bilbilaan ergaa jiruu kan rukutamee oolu xiqqoof hafe.
Muuxannoo du'a qarqara isaan ga'ee hanbisetu akka inni ismaartifoonii meeshaa jumlaan ajjeesurraa gara meeshaa nagaan oofuu gargaarutti akka jijjiiruuf isa kakaase.
Obbo Kobalaas umuriin isaa waggaa 30 yoo ta'u nama Rumaaniyaa appilikeeshinii 'SafeDrive' jedhamu konkolaachistoota yeroo oofan bilbila isaanii dhiisan badhaasu hojjete.
Yeroo konkolaachisaan tokko 6mph (10kmh) caalu, appilikeeshinicha fuula isaarratta (iskiriinii isaarratti "Gad-dhiisi" kan jedhun bilbiilicha sirriitti cufa. Bakka gabaa 'SafeDrive' osoo bilbila hin ilaaliin konkolaachisuun bilbilicha qabxii ittiin gatii gabaa namaaf hirratutti jijjiiruu uuma.
Bakka gad-dhiisu jedhu yeroo oofaa jiranitti gadi qabuun qabxii yeroo deemsa Sanaa galmaa'e nama jalaa haqa.
Appilikeeshiniin kuni sadarkaa addunyaatti fayyadamtoota 100,000fi deggartoota daldalaa kampaanota inshuraansii gurguran 30 hawwatedha.
Obbo Kobalaas appilikeeshinii, 'Milez', dargaggota oofanirratti kaayyeeffates hojjeteera.
Goodayyaa suuraa Konkolaachistoonni osoo oofani mobaayilii xuxxuqan balaaf saaxilamu malu
"Kun deebii deggartoota Ameerikaa keessaa warra ijoollee dargaggoota isaanii konkolaachisan barsiisuu barbaadaniiti," jedhe.
Ammallee yaadichi salphaadha - dargaggoonni oofan yoo nagaan oofan karaa 'Milez' firoota isaaniirraa qarshii argatu.
Biyyi dhaloota Rumaaniyaa du'a balaa konkolaataa waliin galmee addatti gadi bu'aa ta'e qabdi. Guutummaa Gamtaa Awurooppaa keessatti giddugalaan jiraattota miliyoona tokko keessaa 51.5 yommuu ta'u kan Rumaaniyaa naannoo dacha isaati, innis 95.
Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti (WHO) balaa konkolaataadhaan guutummaa addunyaatti namoota miliyoona 1.25'tu lubbuu dhaba.
"Dogoggorsi ismaartifoonii" balaa konkolaataa dabalaa dhufeef sababa. Konkolaachistoonni mobaayilii fayyadaman warra hin fayyadamne harka afur balaa konkolaataadhaaf saaxilamu, jedha Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa.
Image copyright DriveWell
Goodayyaa suuraa Hundeessitoonni 'DriveWell' Harii Balakrishnaan & Saam Maadan akka bareechinee konkolaachifnu fedhu
Kanaafidha namoonni hojii tekinooloojiitti bobba'an lakkoofsaan dabalaa jiru rakkoo kana furuudhaaf carraaqqii taasisaa jiran.
"Ismaartifooniin yeroo kana dogoggoruu konkolaachistootaaf sababa ta'us, nuti ismaartifooniin akka kokolaachistoonni nagaan oofan gargaaru gochuun akka danda'mu agarsiisuu barbaanne," jedha Harii Balakriishaan, hojjetaa olaanaa tekinooloojii Telekomaatiksii Mobaayilii Kaambirijii, kampaanii Ameerikaa appilikeeshinii 'DriveWell' hojjete.
Appilikeeeshinichi dhimma konkolaachisaa hunda kan akka fireenii, humnaa ol saffisa dabaluu, gara malee jallisuufi saffisiisuu safara.
Ammam konkolaachistoonni bilbila isaaniittin akka dogoggoraniifi "qabxii nagaan oofuu(safety score)" jedhu dhuma imalaarratti walitti qabuun to'ata.
Appilikeeshiniin bilisaa boordii gaggeessitootaa kan konkolaachistoonni hiriyyoota isaanii, maatii akkasumas namoota dhuunfaa nagaan oofan faana bu'aa akka danda'an taasisu.
Goodayyaa suuraa About 1.25 million people are killed on the world's roads every year
Qabxiin nagaan ofuun argame akka konkolaachistoonni konkolaataa isaaniif dhaabbata inshuraansii tokko tokkorraa gatii hir'ateen argatan dandeessisa, jedha Balakrishnaan.
Ragaan akka addunyaatti fayyadamtoota appilikeeshinii 'DriveWell' 40,000 argame malli kun bu'a qabeessa akka ta'edha, jedhu ObboMaaddeen.
"Gaafa guyyaa 30, fayyadamaa bililaatiin %35 hirrachuufi %20 lakkoofsa fireenii hir'achuu argine," jedhu.
UK'tti Rooyaal Sosaayitii Balaa Konkolaataa Ittisuutti (Rospa) manaajera kan ta'an Niik Liyood, appilikeeshinoota konkolaachistoota dogoggorsu hir'isuuf qophaa'an abdii agarsiisaa jira.
Rakkoo ismaartifooniin qabu sagalee yeroo hundaa waamichaafi yaadachiisaaf fayyadan nu doggoggorsu. Kanaaf, Roob Joseef, namni umuriin isaa waggaa 27 ta'e London keessatti appilikeeshinii uume 'ReadItToMe' appilikeeshinii Andirroyidii qofaaf hojjetu ergaa barreeffamaa garaa sagaleetti kan jijjiiruufi sagaleemmoo deebisee barreeffamatti kan deebisu tolche.
"Yaadni kun jalqaba kan naaf dhufe yeroon London Irra-keessaa bakkan namoota gidduutti muddamee bilbila koo baasee ilaaluu hin dandeenyerratti ergaan barreeffamaan naaf dhufe ture," jedhe.
Image copyright ReadItToMe
Goodayyaa suuraa Are hands-free apps that read out messages just as distracting?
Appilikeeshinichi ergaa yaadachiisaa bilbillikee fudhate akka iimeeliifi ergaawwan miidiyaalee hawwaasummaa kan akka 'WhatsApp' irraa dabalatee dhufanii dubbis.
Yeroo ammaa kana afaan kamiinuu dubbisuu ni danda'a garuu xiqqoo qofaan deebisa.
"Yeroo konkolaatonni haarawaan tajaajila filannoo ergaa gabaabaa dubbisuu dhiyeessan, filannoo ittiin deebii kennuu hin dhiyeessan, kanaaf waanti akka 'ReadItToMe' qaawwa kana duuche," jedheen.
Appilikeeshiniin fayyadamtota dammaqoo 22,000 qabu, ergaa gababaa akka dubbisuuf bilisaan fayyada, ykn sagalee deeebii deebisu ykn appilikeeshinii biraa fayyadamuu barbaannaan £1.49 ta'a.
Garuu harki bilisa ta'uun balaarraa bilisa nama taasisaa?
"Waa'ee appilikeeshinii nagana oofuu yaaddoon nagaa kana akka warren ergaa sagalee ol kaasanii konkolaachisaaf dubbifaman, dogoggorsuu danda'u," jedha Niik Liyod.
Deebiin isaa tarii osoo adeemsa hin eegaliin dura yaadachiisa bilbilaa walumatti qabaatti cufuudha.
''Roadmap'' Ministeera Barnootaa maal of keessaa qaba?
''Gogiinsa caalaa walitti bu'iinsatu hedduu qe'eerraa buqqaase''
Fala dhibee busaa sadarkaa Afrikaatti badhaafame
Waraanni Ugaandaa mormii Boobii Waayiniin walqabatee dhiifama gaafateera
Ayyaanni Iidii baranaa 'addadha'
Harkifachuu ijaarsa hidha haaromsaa fi furmaata kaa'ame
Obbo Leencoo Lataa: ''Hanga ammaa dhaaba adda taane jirra'
Bilbilli biyya alaatii bilbilaman maaf lakkoofsa Itoophiyaatiin bahu?